ယခုတင်ပို့နေသော High-Density Output Video Walls အတွက် Matrox D1450 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ယခုပို့ဆောင်နေသော High-Density Output Video Walls အတွက် Matrox D1450 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်
Matrox D1450 quad-monitor ဂရပ်ဖစ်ကဒ် - ဗွီဒီယိုနံရံများအားကြည့်ရှုရန်ထိုက်တန်သည်။
Matrox D1450 သည် OEMs နှင့် system integrators များကိုစနစ်တစ်ခုတည်းမှ 16 4K ထပ်တူပြုထားသောဖန်သားပြင်များကိုပါဝါဖြစ်စေရန်အတွက်အဆင့်မြင့်သောဆောက်လုပ်ရေးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုနံရံထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကိရိယာများကိုပေးသည်။
Montreal - ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ —Matrox® သည်၎င်းကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည် Matrox D-Series D1450 Multi-Display ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုသယ်ဆောင်နေပြီ။ ဒီမျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုနံရံသစ် quad-4K ကိုမျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုနံရံများတပ်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည် HDMI®ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည် OEMs၊ system integrators နှင့် AV installers များကို D1450 board များနှင့်ပေါင်းစပ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း 16K display ၁၆ ခုပါ ၀ င်သော high-density-output video နံရံများကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ထုံးစံထိန်းချုပ်မှုနှင့်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဗွီဒီယိုနံရံဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အဆင့်မြင့်ထုံးစံထိန်းချုပ်မှုနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အတူ D4 သည်ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးနှင့်အရေးပါသည့် ၂၄/၇ အပလီကေးရှင်းများအပါအဝင်ထိန်းချုပ်ခန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ , ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပိုပြီး။
ဆန်းသစ်သောနည်းပညာနှင့်နက်ရှိုင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတို့ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော D1450 သည် 4K အထိလေးသောဗွီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည် HDMI တစ်ခုတည်း slot ကဒ်ကနေမော်နီတာ။ OEM, system integrators နှင့် AV ပညာရှင်များသည် D-Series ကဒ်လေးခုအထိဘုတ်မှဘုတ်ဖုတ်ကြိုးကြိုးများမှတဆင့်ပြသနိုင်ခြင်းကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပြီးထပ်တူပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် D1450 သည်မိတ္တူကူးထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုပြသရန် HDCP အထောက်အပံ့အပြင်နောက်ဆုံးပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုရန်Microsoft®DirectX® 12 နှင့်OpenGL®ပံ့ပိုးမှုများကိုပေးထားသည်။
D-Series ကတ်များသည် Matrox ၏ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုနံရံအစုစုနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်သည်။ OEMs နှင့် system integrators သည် D1450 နှင့်တွဲဖက်နိုင်သည် Matrox Mura IPX set-top box များ၊ Blu-ray Disc ™နှင့်မီဒီယာဖွင့်စက်များနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းစက်များအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာကိုကာကွယ်သောရင်းမြစ်များကိုဖမ်းယူပြသရန်အဆင့်မြင့် HDCP လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်ပေါင်းရန်အတွက်ကဒ်များကိုဖမ်းယူပါ။ D-Series များကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည် Matrox QuadHead2Go ™ 64 x 1920x1080p60 ဖန်သားပြင်များရှိအလွန်အစွမ်းထက်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးရန်မော်နီတာထိန်းချုပ်သူများ။
D-Series တွင်ခိုင်ခံ့ပြီးလယ်ပြင်ဖြင့်သက်သေပြသည့် Matrox PowerDesk desktop desktop software ပါဝင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ကျယ်ပြန့်သောသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများ၊ မျိုးပွားစနစ်၊ မဏ္ivိုင်၊ ဘီဇယ်လ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစွန်းထပ်နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများမှ ရွေးချယ်၍ multi-display setups များကိုလွယ်ကူစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Feature ကြွယ်ဝသော Matrox MuraControl ဗွီဒီယိုနံရံကပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အသုံးပြုသူများကိုဒေသတွင်းသို့မဟုတ်အဝေးမှဖြစ်စေ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေ၊ ဗွီဒီယိုနံရံရင်းမြစ်များနှင့်အပြင်အဆင်များကိုသုံးစွဲရန်အလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းကိုပေးသည်။ Matrox video wall API, SDK များနှင့်စာကြည့်တိုက်များကို developer များနှင့် custom control function များနှင့် application များပြုလုပ်ရန်စိတ် ၀ င်စားသော AV installers များအတွက်လည်းရရှိနိုင်သည်။
ဗီဒီယိုနံရံများသည်ခက်ခဲစရာမလိုပါ။ Matrox D1450 ဂရပ်ဖစ်ကတ်သည်သုံးစွဲသူများအတွက်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဖြန့်ကျက်မှုများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်မည်သို့အမြဲတမ်းရည်ရွယ်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Matrox မှစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာ Fadhl Al-Bayaty ကပြောကြားခဲ့သည်။ Multi-4K အသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော slot တစ်ခု၊ အရွယ်အစားအပြည့်အစုံပါရှိသောကဒ်တစ်ခုရှိသည် HDMI Connectors သည် OEMs နှင့် system integrators များကို video wall processor တစ်ခုမှအဆင့်မြှင့်နိုင်မှုနှင့်အဆင်ပြေမှုအသစ်များရရှိရန်အသစ်သောတွေ့ရှိနိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုနံရံကပ်ဖောက်သည်များသည်လာမည့်တပ်ဆင်မှုများတွင် D1450 ၏အားသာချက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအားတွေ့ရသည်။
Matrox D-Series D1450 quad-monitor HDMI ဂရပ်ဖစ်ကဒ် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနံပါတ်: D1450-E4GB) သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ဤ multi-display ဖြေရှင်းချက်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် Matrox ဂရပ်ဖစ်ကိုဆက်သွယ်ပါ.
Matrox Graphics Inc. အကြောင်း
Matrox ဂရပ်ဖစ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ASICs, board, appliances နှင့် software များကိုထုတ်လုပ်သည်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အထူးဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော Matrox ထုတ်ကုန်များသည်ကြယ်ဖမ်းခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြသခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ 1976 မှအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုအင်ဂျင်နီယာ၊ Matrox နည်းပညာကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိပညာရှင်များနှင့်မိတ်ဖက်များကယုံကြည်ကြသည်။ Matrox သည်ကနေဒါနိုင်ငံ Montreal တွင်အခြေစိုက်သောပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှု www.matrox.com/graphics.
Matrox Monarch EDGE သည် Remote Production Code ကိုဖောက်သည် - ဇူလိုင်လ 31, 2020
ယခုပို့ဆောင်နေသော High-Density Output Video Walls အတွက် Matrox D1450 ဂရပ်ဖစ်ကဒ် - ဇူလိုင်လ 31, 2020
4K MATROX ဗီဒီယိုကိုနံရံများ တေးရေး 2020-07-31
ယခင်: OS Studios သည် Black Berry ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ UC Berkeley အတွက် Minecraft တွင် Virtual Graduate ဖန်တီးရန်ကူညီသည်
နောက်တစ်ခု: Matrox Monarch EDGE သည် Remote Production Code ကိုဖောက်သည်